Kwaphela isikhathi eside kwakucatshangwa ukuthi badinga kuphela ukugcwalisa isisekelo lapho ukufudumala - entwasahlobo, ihlobo noma ekwindla. Nokho, ngezinto zokwakha zesimanje kanye namadivayisi e isakhiwo yasishintsha kulendlela. Nyalo-ke gcwalisa egumbini ekwindla zaba njengamathonsi ajwayelekile iba matasa njengemigwaqo ehlobo. Nje kancane indlela ehlukile ukuze Kulokhu.
Mangisho ukuthi uma ukuthelwa ukhonkolo kungenziwa imisiwe ize ehlobo, kungcono ukwenza kanjalo. Ngempela, ekwindla uchitha izinsiza okwengeziwe impahla eyengeziwe, fillers zokwakha ukuthi ungayeki promorznut ukhonkolo, ukudala izimo ngoba solidification yayo egcwele.
Injani hydration ukhonkolo
Abantu bavame sizibuza lapho isisekelo kungenziwa wathela ekwindla, nokuthi kubalulekile ukukwenza i isizini ezingalindelekile ezinjalo. Manje cabanga ngalokho okushiwo ukuqina ukhonkolo, baziqonda kangcono kuzo zonke izinqubo kanye ngokufanele ukuhlela esakhiweni:
lapho besanda kuqala phezu uqweqwe livela ingxube, ke sodium hydrate;
kwalokho yokuzigxilisa ngaphezulu ukudla okuqinile engaphansi kwamanzi;
isinyathelo esilandelayo ukusikwa solidification igobolondo ngenxa ukuhwamuka ketshezi;
Le nqubo iqala ukuya maphakathi, kuze kube uqweqwe kwathiwa amandla.
Ngesisekelo leliqhinga kanye Impendulo yombuzo ukuthi kungenzeka ukuba uthele isisekelo ngo-Okthoba, abakhi abanolwazi ngokuqiniseka athi: "Ingabe" futhi uchaze ukuthi kungani, uqhathanisa loluhlelo ihlobo noma ekwindla-ubusika.
Ukuqhathanisa ngokhonkolo batheleka ukushisa kanye autumn
Kunengqondo ukuthi isisekelo ukushisa kwehlobo seyomile ngokushesha okungaka. Kodwa ngeke isakhiwo yayo aminyene, njengoba kudingeka? Ngoba kuthinta yonke indlu - indlela uyokuma, kungakhathaliseki ukuthi kukhona imifantu e abhidliza izindonga zayo. solidification Rapid kwenzeka ngoba amanzi iyasha ngokushesha. Nokho, akukuhle kakhulu, ngoba esikhundleni salo voids ezenza ukhonkolo ethambile.
In autumn, ethela isisekelo - ngo-Okthoba, isibonelo - kungenzeka ingathiyeki iqiniso lokuthi kunesithwathwa uqale. Lapho amanzi crystallizes, futhi voids akhiwa ngenxa yokuthi ukuthi leli qhwa kwakheka ingxube, okuyinto engcono kakhulu futhi eyandisa, ukudala microcracks. Yingakho ngokugcwalisa egumbini phakathi nenkathi ebandayo Kwenziwa ubuchwepheshe ekhethekile.
izakhiwo Ukhonkolo kukhona esandleni kubakhi
Lapho ingxube Uqinisa, kudala ukusabela ikhemikhali ebangela bafudumale. Ngenxa yalesi ukhonkolo bome kangcono, kodwa ngenxa yokuthi izinga lokushisa ambient ongaphakeme, akukho ukuthi kukhona isibhakabhaka, futhi ingabe yini wome. Ngakho impendulo yombuzo ukuthi uthele isisekelo ekwindla kungaba yebo akunakungatshazwa. Into ebaluleke kakhulu kulesi simo - ibalwa zonke ngokucophelela. Ngaphezu kwalokho, ukuthelwa ukhonkolo ngaso sonke isikhathi kufanele kufakwe uhlelo zokwakha, lokhu kuzovumela ukulungiselela kusengaphambili zonke ezidingekayo izinto, imishini kanye izesekeli.
Umkhuhlane kungcono hhayi ukuba sigcwalise izikhala, ngaphandle uma kungukuthi ngokwanele ngci. Ngempela, ezimweni ezinjalo, ukushisa kwangaphakathi izothatha esifushane kakhulu isikhathi, ngoba yena akanawo isikhathi lukhuni ngokuphelele. Kungcono ukuba afinyelele isisekelo ongaphakeme, kulesi simo ukusabela chemical kanye nekhono lokuqhubeka sula isixazululo isikhathi eside.
Ingabe Zikhona Izimo Ezenza ukhonkolo uthele
Ngokuvamile, ukuze ube nesikhathi ukwakha indlu ibe yindlu entwasahlobo nasehlobo, abanikazi zihlale nentshisekelo ukuthi ungakwazi uthele isisekelo ngo-Okthoba kuya entwasahlobo, njengoba isimo sezulu siya sifudumala, ngokushesha qala ukwakha indlu. Phela uma isisekelo usulungile, ukwakhiwa kuyokwenzeka ngokushesha okungaka. Lokhu kubalulekile ikakhulukazi uma isakhiwo sihlelelwe abakhulu, futhi kukhona ingozi hhayi ukuba isikhathi sokwakha kabusha kuze kube yilapho nenkathi ebandayo esilandelayo.
On the izinga ukhonkolo kuthonywa:
amavolumu nobukhulu balezi isakhiwo;
ngezabelo ethela izakhi;
izinga usimende kanye ukugaya;
kungenzeka amalahle eziphathekako ukwahlukanisa.
Ukuze usimende usabela ngokushesha, kubalulekile ukuba ugaye njengoba fake ngangokunokwenzeka, kuyilapho ethela isisekelo ngo-Okthoba, kuzoba ngcono kakhulu, ngoba ingeyona voids. Umuntu kumelwe amane ukufudumeza lokubolekwa amanzi. Kunoma ikuphi akunakwenzeka ukukwenza nge usimende, ngoba uzolahlekelwa izakhiwo zawo okumelwe zigcinwe, ezidingekile eliphezulu isisekelo. Kodwa lokhu engathandeki kakhulu.
Uma wengeza amanzi afudumele ukuqinisa lokushisa yayo kumele singeqi +30 ° C. Uma ungeze lokuqala kuya yamathebhu, kungenzeka futhi kuvele kushise ngenye. Uma isixazululo ixubene kahle, kungaba ukumelana namazinga okubanda afinyelela eside. Ngaphezu kwalokho, kuyinto ayazika efomini, angewona umuntu, akuyo yonke amakhona nemifantu.
Ubunzima elihlobene ne sezulu ekwindla
Okokuqala umbuzo ukuthi kungenzeka ukuba uthele isisekelo ngo-Okthoba, kuphakama kusukela lokuthi umhlaba promorzshaya, futhi kuyinto engenakwenzeka ukuba ngesandla umbe. Yebo, kodwa ungasebenzisa inqubo ezingaba bambe umgodi anoma yibuphi ubude futhi ukujula. Vele ushayele Excavator kuzodinga ukutshalwa kwezimali.
Isixazululo ezinkingeni obuphathekayo okokuqandisa
inkinga Landelayo zingaxazululeki lwabakhi kulesi sifundazwe eminyakeni eyedlule ukuthi lapho ukhonkolo abandayo liwohloka, iba buthakathaka. Lokhu kungenxa yokuthi yezingxenye kulezi zimo ungafakiwe ngenxa crystallization amanzi ngenxa umthelela kuso frost. Ngakho-ke, gcwalisa egumbini ekwindla, ngisho ngakho ngaphezulu ubusika, kwakukhona okwakubonakala ngiyaphupha.
Manje konke isixazululekile ngosizo izithasiselo chemical, okuyinto ungavumeli amanzi iqhwa. Ngaphezu kwalokho, ithengiswe ukhonkolo ekhethekile, okuyinto vele kuhlanganisa izinto ezikwenza solidification salo esivamile lapho kwamakhaza ashubisa umnkantsha. Amandla ayo musa ihluke uzakwabo ehlobo.
Nokho, abanye bakholelwa ukuthi ukusebenzisa izithasiselo chemical ukhonkolo esakhiweni sokuhlala kuyinto engathandeki, ngoba abaningi babo zinobuthi. Ngakho-ke, ukwakha isakhiwo, udinga ukuba acabangele leli ehilelekile.
Ngisho ukuthulula isisekelo, ngo-Okthoba noma Februwari - kungakhathaliseki usawoti yengezwe ikhambi. Okuqukethwe kwalo akumele leqe 2%, ayikuvumeli emanzini ukuze kuphole. Ngakho, zonke izithako yilezi okuxubile ngokugcwele futhi eqandisiwe. Ngaphandle Ukushisa le ndlela ingasetshenziswa -5 ° C, kanti uma izinga lokushisa lehla ngisho aphansi, kubalulekile ukusebenzisa Ukushisa, okuyinto Kuzoxoxwa.
Okuningi kungaba othambekele zeqhwa isixazululo usebenzisa acid izithasiselo. Basuke wanezela, ngemva kwalokho ingxube yokusabela ikhemikhali kwandisa izinga lokushisa. Ngaphansi kwethonya ukhonkolo seyomile. Futhi-ke, lapho yesithwathwa ezinzima isisekelo kuwufanele yokukhosela esengeziwe ukushisa is hhayi volatilized ngesikhathi esisodwa.
Ekusebenteni, impendulo yombuzo ukuthi kungenzeka ukuba uthele isisekelo ngo-Okthoba, abakhi abaningi bakhetha not add ukuze chemistry isixazululo kanye nje reheat ke. Ngenxa yale njongo eyodwa ingasebenzisa imishini ekhethekile anemisila bafudumale. Nokho, lapho ekubunjweni okufanele ukwenze khona konke ngokushesha okukhulu, ukuze usimende akazange abe nesikhathi ukumisa. Kodwa ngisho noma lokhu kwenzeka, musa uthele amanzi abilayo kuwo. Lokhu kuyoholela ekuthuleni yokuthi ngaphakathi isakhiwo imigodi, okuzokwenza kube ikhwalithi zimbi kakhulu.
Lapho kwenziwe ukwakhiwa egumbini ekwindla, ukuze bazivikele okushisa aphansi, ungasebenzisa enye indlela. I ukhonkolo akusho wengeze lutho, ukungaguquguquki wakhe uhlala, njengoba ehlobo, ukuthi nje isisekelo ngci. Lokhu kungenziwa ngezinto ezahlukene. Ikakhulu esetshenziswa:
Ngokuvamile, ungasebenzisa noma iyiphi impahla improvised. Lapho yesithwathwa ezinzima isisekelo ngisho egcwele sawdust, avikelekile kahle kusuka okushisa angaphansi kwezinga-qhwa. Into esemqoka ukuthi ungqimba engenhla amanzi kungavikela emvuleni. Ngaphezu kwalokho, isidingo ukwenza kummango ukuze amanzi asihlali ngendaba, futhi ohlangothini lwesobunxele isisekelo. Ngokuvamile, kubalulekile ukwenza konke etendeni, ngakho-ke ngeke kube lula.
Ngokuvamile kukhona umbuzo mayelana nokuthenga uthele isisekelo ekwindla kungaba, kodwa, ngoba kukhona eningi dampness, ngaphezu ngenyanga. Liphinde ixazululwe kalula kakhulu: ngaphansi etendeni, eyenziwe polyethylene, ishidi of ukufulela noma ngqo ukushisa isibhamu. Lo moya izikhatha zomoya oshisayo ngaphakathi, amalahle isixazululo kanye nasekugqugquzeleni ukuhwamuka umswakama. Ngakho, ungakwazi kalula ome isisekelo ngisho ngoJanuwari yesithwathwa.
Ngokuvamile izindawo ulayishe ukhonkolo ukunikeza polyethylene abamba ukushisa, kulo lona heater noma ukushisa isibhamu.
Wokuhlelwa kwendikimba omiswe isisekelo
Kukhona enye indlela esingathola omkhulu ukuze ome isisekelo. Lapho ibizwa batheleka wire wabeka isixazululo. Kungenzeka ithusi, insimbi noma aluminium. Ngakolunye uhlangothi, yonke imikhawulo ugongolo ihlukaniselwe amabili, benza bazoxhunywa umshini Welding. Ngakolunye uhlangothi exhunyiwe light isibani, ezimbili ephethelweni ngalinye. Izibani kufanele bube 36 V, okubaluleke - konke kudingeka ukuba uxhume kahle. Uma kukhona iphutha, ngeke uthole lutho. Ngokulandelayo, izintambo axhunyiwe ukuba izibani ngazimbili futhi axhunyiwe kudivayisi. Eyokuqala uzakuza phezu ukukhanya lokuqala fiphaza, kodwa lapho ukhonkolo iqala ukuze ome ukuphuma, uyozishisa licace. Ngaleyo ndlela, singaqonda ngokuphelele ukugcina wonke ukusebenza futhi bazi lapho isisekelo usulungile. Le ndlela ubuye ezifanele ukufudumeza isisekelo ngo-Okthoba noma kwezinye inyanga abandayo.
abakhi abaningi ngokuvamile uthanda ekwindla ethela ukhonkolo, ngoba engenzi Ewufrathe out njengoba kwenzeka e ukushisa kwehlobo. ekubunjweni indlela, noma kunalokho, indlela ukushisa nokugcinwa ingxube kufanele kukhethwe, esekelwe izimo zezulu, imishini etholakalayo kanye izinto.
Ukwakhiwa okugeza eyenziwe izingodo
Izimiso eziyisisekelo zobuzwe bezwe lobuKristu